Ti Gonzi Archives - iHarare News `); });
Ti Gonzi (File Image) Ti Gonzi Appears In Court After Assaulting His Baby Mama Musician Tinashe Gonzara who is popularly known as Ti Gonzi has appeared at the Harare Magistrates' court after he reportedly assaulted his baby mama…
Rapper Ti Gonzi Quits Drugs Zim Hip Hop artist Ti Gonzi has said that he is now leaving a decent life after quitting drugs. The award-winning rapper, real name Tinashe Gonzara, said that he has now quit drugs after getting the…
Zim Rapper T Gonzi Apologizes To Fellow Rapper Mudiwa For Shading Him Top Zimbabwean rapper, Ti Gonzi has eaten the humble pie and apologized to fellow rapper Mudiwa for calling him a show off. The two rappers have now buried the…
Allen Brown	 Oct 14, 2019 0
Zim Hip Hop artist Ti Gonzi, real name Tinashe Gonzara, has revealed that he has finally recovered his memory after he spent days in critical condition back in March after he was left for dead for in a horrific attack. The rapper…
Ti Gonzi gives a horrifying account of robbery attack Zimbabwean Hip Hop Artist Tinashe Gonzara popularly known as Ti Gonzi is alive and well and now out of hospital. The rapper was attacked by a gang of armed robbers who stabbed him in…